Global Currency Reserve စျေး - အွန်လိုင်း GCR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Global Currency Reserve (GCR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Global Currency Reserve (GCR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Global Currency Reserve ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $341 088.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Global Currency Reserve တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Global Currency Reserve များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Global Currency ReserveGCR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000467Global Currency ReserveGCR သို့ ယူရိုEUR€0.000396Global Currency ReserveGCR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000358Global Currency ReserveGCR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000426Global Currency ReserveGCR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00421Global Currency ReserveGCR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00295Global Currency ReserveGCR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0104Global Currency ReserveGCR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00175Global Currency ReserveGCR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000625Global Currency ReserveGCR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000652Global Currency ReserveGCR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0104Global Currency ReserveGCR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00362Global Currency ReserveGCR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00254Global Currency ReserveGCR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.035Global Currency ReserveGCR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0788Global Currency ReserveGCR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00064Global Currency ReserveGCR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000707Global Currency ReserveGCR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0146Global Currency ReserveGCR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00325Global Currency ReserveGCR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0494Global Currency ReserveGCR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.555Global Currency ReserveGCR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.18Global Currency ReserveGCR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0344Global Currency ReserveGCR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0129
Global Currency ReserveGCR သို့ BitcoinBTC0.00000004 Global Currency ReserveGCR သို့ EthereumETH0.000001 Global Currency ReserveGCR သို့ LitecoinLTC0.000008 Global Currency ReserveGCR သို့ DigitalCashDASH0.000005 Global Currency ReserveGCR သို့ MoneroXMR0.000005 Global Currency ReserveGCR သို့ NxtNXT0.0328 Global Currency ReserveGCR သို့ Ethereum ClassicETC0.00007 Global Currency ReserveGCR သို့ DogecoinDOGE0.133 Global Currency ReserveGCR သို့ ZCashZEC0.000005 Global Currency ReserveGCR သို့ BitsharesBTS0.0179 Global Currency ReserveGCR သို့ DigiByteDGB0.0161 Global Currency ReserveGCR သို့ RippleXRP0.00159 Global Currency ReserveGCR သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 Global Currency ReserveGCR သို့ PeerCoinPPC0.00157 Global Currency ReserveGCR သို့ CraigsCoinCRAIG0.211 Global Currency ReserveGCR သို့ BitstakeXBS0.0197 Global Currency ReserveGCR သို့ PayCoinXPY0.00806 Global Currency ReserveGCR သို့ ProsperCoinPRC0.058 Global Currency ReserveGCR သို့ YbCoinYBC0.0000002 Global Currency ReserveGCR သို့ DarkKushDANK0.148 Global Currency ReserveGCR သို့ GiveCoinGIVE1 Global Currency ReserveGCR သို့ KoboCoinKOBO0.104 Global Currency ReserveGCR သို့ DarkTokenDT0.00043 Global Currency ReserveGCR သို့ CETUS CoinCETI1.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 06:05:01 +0000.